HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBUDO Wuxuu Noqday Magaca kafaalaqaade Naadiga Kubadda Koleyga ee Gemlik
08 / 12 / 2019 16 Bursa, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
budo waa magaca kafaala qaada naadiga kubbadda koleyga ee gemlik
Shirkadda Bursa Metropolitan degmada Gaadiidka site Burulaş in Bursa Sea Basaska (BUDO), Turkey Basketball 1. Noqday magaca kafaalaqaaday Naadiga Kubadda Koleyga ee Gemlik, oo ku dhibtooday Horyaalka.
Bixinta hoolal isboorti xarumaha waxbarashada ee Bursa, taageerida naadiyada isboortiga hiwaayadda, u keenida magacyo cusub isboortiga Turkiga oo leh laamo ka mid ah naadiga Belediyespor Club ujeedadeedu tahay inay isboortiga ku faafiso saldhiga degmada Bursa Metropolitan sidoo kale waxay taageero ka heshay Gemlik Basketball Club. Bixinta taageerada baska gaar ahaan ciyaaraha aan ilaa hadda jirin, Dawladda Hoose ee Magaala Weyn waxay dhowaan noqotey kafaalasho magaca BUDO iyo Naadiga Kubadda Koleyga ee Gemlik.
Saxiixyada waa la dhaliyay
Magaca heshiis kafaalaqaad ah oo udhaxeeya BUDO Gemlik Naadiga Kubbadda Koleyga iyo Dowlada Hoose ee Magaalo Weyn ayaa lagu kala saxiixday ciyaarta Bandırma Red. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Alinur Aktas iyo Madaxweynaha Naadiga Berkay Bulut ayaa kala saxeexday saxeexyada, kuxigeenka Bursa Zafer Isik maalintan macnaha leh kama tagin taageerayaasha isboorti keligood. Isaga oo ka hadlaya xafladda saxiixa, Duqa magaalada Aktaş ayaa yidhi, aslında Runtii waxaan bixinaynay taageero gaadiid. Waxay yiraahdeen waxaan wax ka qaban karnaa kafaala qaadista. Xaqiiqdii, waxaan sameynay qorshaheena sanadkaan. Laakiin waad hubsan kartaa inaan siinno dhammaan taageeradeena gaar ahaan horumarinta isboortiga gudaha. Tan kaliya maahan bartamaha Bursa laakiin sidoo kale waa degmooyinkayaga. Sidaad ogtahay, waxaa jira koox Metropolitan Belediyespor kana tirsan Horyaalka Volleyball Efeler League. Waxaan leenahay koox qeybta koowaad ee haweenka kubbadda koleyga. Laakiin Kubadda Koleyga Gemlik, Berkay Bulut oo hoos imaada gudoomiyaha waa shaqo aad u wanaagsan. Waan ogahay in ka badan caruurta 400 inay kubad ku ciyaaraan dusha sare ee Basketball Gemlik, qoysaska ayaa raacaaya. Waxaan nidhi ma noqon karno shisheeye waxyaabaha sidan oo kale ah. Waxaan ku heshiinay taleefanka maalintaas. Iyo laba maalmood ka dib, wuxuu ka adkaaday Gemlik Basketball Center. Kadibna guul ayuu ku gaadhay garoonka. Arbacadii, wuxuu ka adkaaday degmada Mamak, taas oo macnaheedu yahay inuu ku sameeyay 3 3. Shaki kuma jiro in Kubadda Koleyga Gemlik uu sii socon doono sida BUDO Gemlik Basketball ilaa maanta laakiin waa laga adkaanayaa maanta waxayna sameyn doonaan 4 4. Haddii milixda ay ku jirto maraqa, sidee ayaan ugu faraxsanahay ”.
Isla waqtigaas, Duqa Magaalada Alinur Aktas, kooxda BUDO Gemlik Basketball Bandırma Red, oo iyagu maalgeliyey magaca ciyaarta la daawaday bilow ilaa dhamaad. Basketball BUDO Gemlik ayaa ka adkaatay degmada Merkezefendi, Bornova Belediyespor iyo degmada Mamak seddexdii kulan ee ugu dambeysay waxayna ku guuleysteen inay garaacaan Bandırma Kırmızı 97-95 ciyaar aad u xiiso badan. Duqa magaalada Aktaş wuxuu noqday lammaanaha guuleystaha qolka labiska waxaana u hambalyeeyay dhamaan ciyaartooyda midba midka kale.
Borusan Lojistik waxay ka dhaadhicisay TCDD inay ku xirto Gemlik iyo dekedaha ay tareenka tareenka…
RayHABER SmartRailEurasia waxay noqotaa kafaalasho rasmi ah saxaafadda
Basaska Badda ee Bursa
Naadiga Kubadda Koleyga ee Gemlik